Soosaarida Marjoram (Soosaarida Origanum) Qiimaha, Alaab-qeybiyeyaasha, Soosaarayaasha Bolise
Soosaarida Marjoram (Soosaarida Origanum)
[Magaca Botanical] Origanum majorana L.
[Waxyaabaha firfircoon] Sabinene
[Muuqaal] Budada ganaax ah oo bunni huruud ah (U la xiriir Nadaafad)
2. Lagu dabaqay qaybta wax soo saarka caafimaadka;
3. Lagu dabaqay qaybta daawada;
4. Lagu dabaqay goobta la isku qurxiyo;
Ku saabsan Soosaarida Marjoram (Soosaarida Origanum)
Soosaarida Marjoram waxay leedahay xoogaa udgoon qadhaadh, oo dabciya neerfaha oo yareeya madax xanuunka iyo hurdo la’aanta. Gaar ahaan, cabitaanka cuntada ka dib waxay ka caawin kartaa dadka inay hurdo la'aan u seexdaan habeenkii. Sidoo kale, waxay baabiin kartaa sunta jirka ku jirta waxayna ka caawin kartaa dheefshiidka. Cabitaankiisa marka aysan jirin rabitaan cunto sidoo kale waxay kicin kartaa rabitaanka cuntada. Marjoram waxaa loo isticmaali jiray uunsi ahaan ilaa waqtiyadii hore, waxaana lagu karin karaa yaanyo iyo hilib.
Soo saarista Marjoram waxay waxtar u leedahay ballaarinta halbowlayaasha, microvessels, iyo ka saarida istaaga dhiigga.